Nyore DirectMedia Layer raibhurari yekurerutsa kunyora mitambo uye multimedia application | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura SDL 2.0.10 kuburitswa kweraibhurari kwakaziviswa (Nyore Yakananga Layer), iyo chinangwa ndechekurerutsa kunyorwa kwemitambo uye multimedia kunyorera.
Nyore DirectMedia Layer raibhurari-yepuratifomu yekuvandudza raibhurari yakagadzirirwa kupa yakaderera-chikamu kuwana kune odhiyo Hardware, keyboard, mbeva, joystick, uye mifananidzo kuburikidza OpenGL uye Direct3D. Iyo inoshandiswa neakakurumbira vhidhiyo inoridza software, emulators, uye mitambo, kusanganisira Valve's yekuhwina-kuhwina katarogu nemazhinji Humble Bundle mitambo.
1 Nezve Nyore DirectMedia Layer
2 Main nyowani maficha eRinyore DirectMedia Layer 2.0.10
3 Maitiro ekuisa yakapusa DirectMedia Layer paLinux?
Nezve Nyore DirectMedia Layer
Muraibhuraria inopa maturusi senge Hardware yakakwidziridzwa 2D uye 3D mifananidzo yakabuda, kugadzirisa kuiswa, kurira kwekuteerera, 3D kuburitsa kuburikidza neOverGL / OpenGL ES uye mamwe akawanda akafanana mabasa.
Nyore DirectMedia Layer inowirirana zviri pamutemo neWindows, Mac OS X, Linux, iOS uye Android, kunyangwe iine rutsigiro rwemamwe mapuratifomu akadai seQNX, pamwe nemamwe maratidziro uye masisitimu akadai seSega Dreamcast, GP32, GP2X, nezvimwe.
Main nyowani maficha eRinyore DirectMedia Layer 2.0.10
Mukuburitswa kweshanduro iyi nyowani yeRinyore DirectMedia Layer 2.0.10 mutyairi abviswa kubasa achishandisa Mir kuratidza server uchifarira mutongi kuti ashande kuburikidza neWayland.
Macros SDL_RW * ive yakasarudzika seti yemabasa uye mabasa akawedzerwa SDL_SIMDGetAlignment (), SDL_SIMDAlloc () uye SDL_SIMDFree () kugovera ndangariro yekushanda SIMD.
Vagadziri vacho vanoona kuti iyo SDL inopa API inoshandurwa nekutadza uchishandisa batch kupa, iyo inogonesa kuita kuri nani. Sarudzo SDL_HINT_RENDER_BATCHING yakawedzerwa kudzora batch modhi.
Kune iOS 13 uye tvOS 13, rutsigiro rweXbox nePS4 madhairekitori asina waya akawedzerwa, pamwe nekuisa mameseji uchishandisa makhibhodi eBluetooth.
Zve Android, yakaderera latency kurira kwekugadzirisa modhi inoitwa neOpenSL ES inoitwa.
Yakawedzera sarudzo SDL_HINT_ANDROID_BLOCK_ON_PAUSE kudzora kuvharika kwechiitiko chiuno kana iko kunyoreswa.
Pakati pedzimwe shanduko dzinomira mushanduro iyi nyowani ndeidzi:
Yakawedzerwa SDL_RenderDefex SDL
Yakawedzera basa SDL_GetTouchDeviceType() kuona iyo mhando yekubata chishandiso (yekubata pani kana yekubata skrini ine hama kana mhedziso mahodhi)
Kumanikidza kuitiswa kwemitsetse yematch batch, iko kufona kwawedzerwa SDL_RenderFlush(), iyo inogona kubatsira mune yemubatanidzwa wekudhirowa kuburikidza neSDL uye yakananga kudhirowa;
Yakawedzera sarudzo SDL_HINT_EVENT_LOGGING kugonesa SDL yechiitiko kutema nekuda kwekugadzirisa zvinangwa
Yakawedzera sarudzo SDL_HINT_GAMECONTROLLERCONFIG_FILE kuseta iro zita refaira pamwe nekugadzwa kwevatongi vemitambo;
Yakawedzera sarudzo SDL_HINT_MOUSE_TOUCH_EVENTS kudzora synthesis yekubata zviitiko zvinoenderana nezviitiko zvegonzo
Kuvandudzwa kwekubata kweasina kusimba WAVE uye BMP mafaera ekuvharidzira zvingangoita kusagadzikana
Nezve iko kuiswa uye kushandisa ruzivo. Vanogona kubvunza chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Nyore DirectMedia Layer raibhurari yekurerutsa yekunyora mitambo uye multimedia kunyorera